Ikhabhathi yelog epholileyo enemibono emangalisayo
Oppdal, Trøndelag, Norway
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguAstrid
Relax nosapho kunye nabahlobo kule cabin ithokomeleyo yasentabeni kuphayina wokwenyani waseNorway. Basa umlilo eziko okanye kwipani yomlilo kwaye wehlise amagxa akho. Apha ukwindawo ekufutshane yamava endalo entle kwaye unendlela emfutshane yokuya kwizixhobo ezikwiziko le-Oppdal.
3 amagumbi okulala; ezimbini ezineebhedi eziphindwe kabini kunye nenye enebhedi yosapho (+ indawo ephezulu enoomatrasi aba-2).
Ilinen yokulala kunye neetawuli zibandakanyiwe. Uya kufumana iziqholo, ioyile, iswekile, isepha yesitya, iphepha le-dope, i-tealight, isepha, ishampu, njl.
Iinketho zekofu: Uya kufumana umenzi wekofu ngesihluzo, ijagi encinci ye-espresso, umatshini weNespresso wama-ampoules amancinci e-aluminiyam, ijagi yokucofa kunye neketile.
Jonga uluhlu olupheleleyo lwezixhobo.
Ithafa ebanzi enefenitshala yangaphandle kunye nomgodi womlilo. Ishedi yezixhobo ezizimeleyo apho uya kufumana iinkuni, imiqamelo kunye nesikhumba seegusha kwizitulo zangaphandle. Apha unako ukubeka iibhayisikili kunye ne-skis.
I-cabin ifumaneka kwintsimi ye-cabin, ifumaneka ngokukhululekileyo ngaphandle kokubonakala kwaye sinelanga ukusuka kusasa ukuya kusihlwa kwi-terrace ejongene nezantsi. Ukusuka apha kukho amathuba amahle kakhulu okuhamba, ukuhamba ngebhayisekile kunye nokutyibilika. Ungabophela kwiskis sakho esinqumla ilizwe kwizinyuko kwaye uye ngqo kwiindlela ezilungiselelwe, okanye uthathe iskis entabeni. Kumalunga neekhilomitha ezisi-7 ukuya kwindawo yokutyibiliza ekhephini iStølen.
Indawo ye-cottage epholileyo, indawo yokupaka efanelekileyo kunye nekhululekile kwi-cottage.
Umbuki zindwendwe ngu- Astrid
Jeg ble medlem i 2015, men prøver meg som vert for første gang nå i 2021 og er spent på det!
Ifumaneka ngefowuni kunye ne-sms.
Iilwimi: English, Français, Norsk, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Oppdal